Uxolo Disqus, ngingumlandeli manje! | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 16, i-2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngazo zonke lezi zinkinga sezixazululiwe, nokusebenza okukhulayo kwe-Disqus nokuhlanganiswa kwi-Social Media, kunengqondo impela kubabhlogi be-WordPress ukufaka i-plugin nokuhlanganisa insiza. Angikazami i-IntenseDebate, futhi angikaze ngibone izindaba eziningi kakhulu noma ukwamukelwa ngakho… noma ngubani okusebenzisayo?
Abantu abanomusa eDisqus bangivumele nokuthi ngithumele okuqukethwe kwamabhulogi ami namazwana nge-XML futhi ngikulayishe eqenjini labo lokusekela. Manje bathuthela wonke amazwana amadala asuka kubhulogi yami aya enjinini yabo. Kuhle impela!
Ngakho… kubasebenzi baseDisqus, ngikweleta ukuxolisa ngokunikeza uhlelo lwakho ibanga elihlulekayo. Yize bekuyinto efanele ukuyenza ngaleso sikhathi, sengingumlandeli manje! Unomkhiqizo omuhle futhi ngiyakuthanda ukuhlanganiswa kwe-Twitter!
Tags: uhlelo lokuphawulauhlelo lokuphawulaDisqus
Shintsha Injini Yakho Yokucinga ku-Safari on Leopard
Jun 16, 2009 ku-10: 06 PM
Nginenkinga ethile ngeDisqus, kepha ngombono iyi-plugin enhle. Ngiyithandile indlela abangithumela ngayo ama-imeyili uma othile ephawula, kepha kukonke nje uhlelo belungangisebenzeli. Ucabangani ngalezi zinhlelo ezithathe izintambo zeSezWho?
Jun 16, 2009 ku-6: 15 PM
Ngijabule ukuthi ngingasiza =) Zizwe ukhululekile ukungibamba uma udinga noma yini enye.
I-Oct 10, i-2009 ku-10: i-46 PM
Bengisesikebheni esifanayo, ngisuka kuWordPress kuphela ngaya eDisqus kepha nginezinkinga ezifanayo ngakho-ke ngaya ku-IntenseDebate manje sengizama iDisqus futhi ngoba i-ID bekuyizo zonke izinhlobo zebhegi.
I-Disqus yami ibonakala inenkinga efanayo wonke umuntu anayo nge-WordPress 2.8.4, ngeke nje ingenise imibono.
Ngabe kuzofanele ngiyicime bese ngithola enye into…. futhi?
Feb 22, 2011 ngo-3: 59 AM
Kumele ngivume - izinwele ze-floppy-of-paper ku-DoAX2 bezingudoti nje.
Okthoba 14, 2011 ngo-1: 11 AM
Kuthunyelwe okuhle kakhulu nge-disqus
I-Oct 30, i-2011 ku-8: i-09 PM
I-Oct 30, i-2011 ku-8: i-59 PM
Ngicabanga ukuthi kuyabamunca ukuthi abogaxekile bathathe le mboni kabi kangangokuba sidinga ukuba nezinyathelo endaweni efana nokungena ngemvume; noma kunjalo, kumasayithi ebhizinisi - kunengqondo futhi kuyindlela enhle yokuqoqa imininingwane ethile ngamathemba.
Dec 19, 2013 ku-9: 29 AM
Usho ukuthini uma uthi “ugaxekile”?
Jan 1, 2012 ku-9: 44 AM
Ngiyayithanda i-Disqus, elula kakhulu ukuyifaka nokusebenziseka kalula. Vumelana noDouglas ngokuthi kuyadingeka yini ukungena ngemvume, okungenani kunezindlela eziningi zokungena ngemvume, i-google, yahoo, facebook, i-twitter njll.
Feb 22, 2012 ngo-7: 08 PM
Ngiyayithanda nje. Kuyasiza kakhulu Kulula ukuyisebenzisa.
Mar 26, 2012 ku-11: 44 AM
Siyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ukuxoxa ngalokhu, ngizizwa ngiqinile
ngakho futhi uthanda ukufunda kabanzi ngalesi sihloko. Uma kungenzeka, njengoba uzuza
ubuchwepheshe, ungathanda ukuvuselela ibhulogi yakho ngolwazi oluthe xaxa? Ikona
ilusizo olukhulu kimi.
Ngo-Apr 18, i-2012 ku-6: 58 AM
Ngithanda nje ukuthi i-Disqus yomphakathi injani! Kulula kakhulu ukuyisebenzisa emphakathini kunanoma yiluphi olunye uhlelo lokuphawula "olumsulwa" engingalucabanga.
Nov 16, 2012 ngo-1: 14 PM
Disqus iyamangalisa !!
Mar 5, 2014 ku-9: 05 AM
Awuqinisekile ukuthi ngabe ipulatifomu yokuphawula engcono kunazo zonke, kepha iDisqus ikhule ngokushesha okukhulu ngonyaka odlule noma emibili.
Mar 5, 2014 ku-9: 13 AM
Izamile ukusebenzisa i-plugin, kepha ibambe njengamanje. Sekuvele kunama-plugins amaningi kakhulu, afaka elilodwa lamazwana we-FB.